Ny afisy vaovao an'ny Star Wars: The Last Jedi dia mampiseho mena indray | Famoronana an-tserasera
Luke Skywalker hiverina any Star Wars aorian'ny fisehoany epic amin'ny faran'ny Star Wars: Mifoha ny hery. Amin'ity Krismasy ity dia hanana bebe kokoa izao rehetra izao noforonin'i George Lucas isika izay hifanatrehan'ny herin'ny tsara sy ny ratsy amin'ny tantara izay nanjary saga habakabaka tsara indrindra tamin'ny fotoana rehetra.
Tao anatin'ny 24 ora farany dia nanatrika ny tranofiara vaovao ho an'ny Episode 8: The Last Jedi ary ilay iray amin'ny afisy vaovao ny sarimihetsika. Izany dia mitarika mivantana amin'ny fahatsapana fa hisy ra be sy ady epic be. Ny mena amin'ny afisy dia mampiseho ny toetran'ny ady amin'ity fizarana vaovao ity saga, an'ny Disney hatramin'ny nividianany ny zon'i George Lucas.
El afisy mampiseho symphony fahitana mena ary, araka ny efa nolazainay ary nihaona izahay 9 volana lasa izay raha vao nahita izany fanovana ny sary izany, manolo-kevitra fa tena hihosin-dra ny raharaha amin'ny tapany faharoa amin'ny trilogy Star Wars fahatelo. Saika afaka nilaza izahay fa mitohy izay hita tao amin'ny The Empire Strikes Back, ka ny The Last Jedi dia miditra amin'ny maizina indrindra amin'ny tontolon'ny Star Wars.
Ary koa, ny ekipa artista, ao ambadiky ny famonoana ity afisy ity, dia tsy te-hiala amin'ireo mahery fo fototra amin'ity fizarana vaovao an'ny Star Wars ity, manana an'i Rey izahay, miaraka amin'ny lightsaber-ny, ary Kylo Ren, ny mpifanandrina aminy amin'ny sabany manokana izay manana lantom-pivavahana kely.
Mampiavaka an'i Jeneraly Leia eo afovoan'ny afisy, ho fanomezam-boninahitra an'i Carrie Fisher, izay nandao antsika tamin'ny taon-dasa. Manana Chewbacca, R2-D2 ary C-3PO koa izahay. Sarimihetsika Star Wars vaovao izay havoaka amin'ny 15 Desambra, ka Krismasy tena mahaliana no andrasana izay andian'ny hery miandry anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ity ny afisy vaovao an'ny Star Wars: The Last Jedi ary milaza fa hisy rà
Tena tsara ny famolavolana, tiako ny firindrana misy eo amin'ny loko sy ny singa ...